-यो फोटो १९९८/९९ तिर काठ्माण्डौमा भएको एउटा बैठकको हो, तत्कालिन महामहिम राजदुत राल्फ फ्रान्क अगाडि मैले गरेको प्रस्तुति
आज मैले अलिकति आफ्नै उदाहरण दिएर गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनआरएनए एनसीसी) अमेरिकाको २०१९ का ९ औं बिश्व सम्मेलनका लागि छनोट गरिएका डेलिगेट्सबारे लेख्ने जमर्को गरेको छु। यो लेखन धेरैलाइ मन नपर्न सक्छ, कतिले सब बकबास हो भन्नेछन होला। कतिले आफ्नै कथा संझने छन। कसैलाई मन परोस या नपरोस तर पनि यो भएको यथार्थ हो, मैले केवल उजागर गरिदिएको मात्र हो। यो अर्थमा म एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुँ।
नेपालको बिना मियोको ठाडो राजनीति सिकेर आएका नेपाली व्यक्तिहरु नेतृत्व तहमा पुगेपछि आफूलाई खुल्ला साँढे नै संझन्छन। तल भर्याङ्ग अरुलाई समाउन लगाएर टुप्पा चढेकाहरुलाइ समाउनेले भर्याङ्ग छोडिदिए के हविगत हुन्छ, त्यो भने थाहा हुन्न। नियम नजान्नु फरक कुरा हो तर पनि नियम मिच्नु, नजर अन्दाज गर्नु भने नाङ्गो नाच्नु हो।
अब सुरु गरौं प्रसङ्ग;
नेपालका राजनैतिक पार्टीहरुले स्वास्थ्य परिक्षण गरेर दिर्घ रोगी र ठूलो उपचार खर्च आवश्यक्ता भएकाहरुलाई निर्वाचनमा स्थानिय र राष्ट्रिय निकायको उम्मेदवार र पार्टीको नेतृत्व नदिने निर्णय गरे भने के होला? सायद पार्टीको महाधिवेशनका बखत नेपालका डाक्टर जति व्यस्त अरु कोहि हुन्नन होला। हुन त डाक्टर नै नक्कली हुने ठाउँमा हेल्थ सर्टिफिकेट कस्ता बन्लान त्यो कुराको सजिलै अन्दाज गर्न सकिन्छ।
अब मैले मेरै कुरा सुरु गरे:
मैले मेरो आफ्नो स्वास्थ्य परिक्षण गरेर, खोप लगाएर, दन्त मन्जन गरेर, हातमा स्यानिटाइजर लगाएर आएको छु। म एनसीसी अमेरिकाको ७३% मत ल्याएर निर्वाचित भएको पूर्व मिडिया कोअर्डिनेटर हुँ। यस बाहेक अरु थुप्रै योग्यता छन्। अब म अमेरिकाको डेलिगेट्स मात्र होइन एनआरएनएमा उम्मेद्वार हुन पनि योग्य भएको छु। तर पनि यो एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाले किन हो कुनी पहिलो लिष्टमा मलाइ पारेनन। दोश्रो दर्जाको निर्वाचितमा राख्यो।
हुन त म:
१. निर्वाचित भएको एनसीसी अमेरिकाको पूर्व मिडिया कोअर्डिनेटर
२. एनसीसी अमेरिकाको आजीवन सदस्य
३. एनसीसी अमेरिकाको बिधान कमिटी २०१३-२०१५ को सदस्य
४.एनसीसी अमेरिकाको २०१५ मा निर्वाचनको बखतको तत्कालिन महासचिव, सचिव र प्रवक्ता समेत निर्वाचनमा उम्मेद्वार भएकाले ती तिनै पदको कार्यबाहक र आफ्नो निर्वाचित मिडिया कोअर्डिनेटरको समेत जिम्मेवारी लिएको व्यक्ति
५.एनआरएनए आइसीसीको न्यूजर्सीमा भएको २०१६ को क्षेत्रीय सम्मेलनको स्मारिकाको प्रधान संपादक
६.एनआरएनए आइसीसी मिडिया कमिटी २०१५-२०१७ को अमेरिकाज क्षेत्रको क्षेत्रीय संयोजक
७.एनआरएनए आइसीसीको वर्तमान महासचिव डा बद्रि के सी संयोजक रहेको Policy and Procedures कमिटी २०१७-२०१९ को सदस्य
८.एनआरएनए ९ औं विश्व सम्मेलन तथा अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशन ब्यबस्थापन कमिटी २०१९ को सदस्य
९.विगत २०१३ को एनआरएनए महाधिवेशनमा तत्कालिन अध्यक्ष प्रल्हाद के सीको भनाइ अनुसार नै म अमेरिकाको डेलिगेट्स भएर काठ्माण्डौ गएको थिएँ। सोल्टी होटल पुग्दा मेरो नाम डेलिगेट्समा पाइन। अनि म घर फर्किएँ। तर पनि २०१५ देखि नियमित रुपमा डेलिगेट्स भएको व्यक्ति हुँ।
१०.एनआरएनए मुख्यालय निर्माणका लागि तत्कालिन एनआरएनए आइसीसी अध्यक्ष शेष घलेको अमेरिका भ्रमणको प्रचार-प्रसार र फण्ड रेजिंग सफल बनाउन भूमिका खेल्नेहरु मध्ये एक। यस बाहेक थुप्रै जिम्मेवारी लिएर संघको काम गरेको व्यक्ति।
११. पढाइकै कुरा गर्दा, पाटन संयुक्त क्याम्पसबाट समाजशास्त्रमा एमए गरेको हुँ। अमेरिकाबाट अरु एक बर्षको प्राबिधिक ज्ञानको कोर्ष पनि लिएको छु।
१२. चितवनका थारु र गुरुङ अनि सर्लाही र उदयपुरका प्रजा (मुशहर) जनजातीहरुको छुट्टा-छुट्टै स्थलगत अध्ययन गरेको छु। त्यसबाट प्रजाहरुको प्रोजेक्ट नै संचालन भएको थियो।
१३. नेपालमा हुँदा अन्तराष्ट्रिय ननप्रफिट क्षेत्रमा करिब डेढ दशक प्लानिङ, मनिटरिङ, इभ्यालुएशन र प्रोजेक्ट अपरेशनमा काम गरेको हो। नेपालको पूर्व मेची देखि पश्चिम कैलाकी-टिकापुर र सुर्खेत सम्म पुगेर काम गरेको छु। अमेरिका बसेको पनि जुगौं भैसक्यो।
१४. पत्रकारिता मेरो पेशा र ब्यबसाय दुवै होइन। तर पनि २००८ देखि अमेरिकाबाट इमिग्रेशनमा सुरु गरेको यो संचारको प्रयास ऐले आएर नेपाली जातीका लागि बिश्वभरि पुगेको छ। यो मेरो पत्रकारिता होइन केवल नेपाली जातीको लागि एउटा संचार प्लाटफर्म संचालन गरेको हो। यस बीच १०० भन्दा धेरै अमेरिकी इमिग्रेशनबारे भिडियो, लेखन र अन्य सामग्री प्रसारण गरेको छु।
१५. गैरआवासीय नेपाली संघबारे १,००० (एक हजार) भन्दा धेरै समाचार, लेख, टिप्पणी, नितिगत बिषयमा लेखेको छु।
१६.मैले उठाएका नीतिगत कुराहरुमा गैरआवासीय नेपाली संघका अग्रजहरुले पनि पसंसा गरेका छन्। धेरै अग्रजहरुका बारेमा लेखेको छु। कतिपयको त निर्वाचन क्याम्पेन इन्चार्ज नै भएको हुँ। त्यहाँ कहिल्यै समस्या भएन। तर पनि खुशीको कुरा मान्नुपर्छ कि अमेरिकाको छनोट टोलीमा भने म दोश्रो दर्जाको निर्वाचितमा पर्दो रहेछु।
१७. नेपाल, इण्डिया र श्रीलंकामा काम गर्दा थुप्रै प्रोजेक्ट अपरेशनल दस्ताबेज बनाएको छु। नेपालमा अन्तराष्ट्रिय ननप्रफिटमा काम गर्दा प्रत्येक ६/६ महिनामा हुने सल्लाहकारहरुको बैठकमा नेपालको लागि अमेरिकी महामहिम राजदूत पनि आमन्त्रित हुने गर्नुहुन्थ्यो। नेपालको मन्त्रालयका प्रतिनिधि, डा आरजु देउबा लगायत थुप्रै उपस्थित हुने फादर वाट्रिनले चेयर गर्ने बैठक मलाइ अझै याद छ। मलाइ धेरै माया गर्ने फादर वाट्रिन त अब रहनु भएन। तत्कालिन नेपालका लागि महामहिम राजदूत राल्फ फ्रान्क कता हुनुहुन्छ मलाइ थाहा छैन। तर उहाँसँगको बैठक अझै याद छ। मैले प्रस्तुत गरेको कैलाली, सुर्खेत, चितवन र कास्की प्रोजेक्टहरुमा धेरै जिज्ञासा राख्नु भएको थियो उहाँले। महामहिमले अन्तमा हाँस्दै भन्नुभएको थियो-कस्तो राम्रो प्रोजेक्ट, कसरी तिमीलाई सबै कुरा सजिलै फटा-फट जवाफ दिन आउँछ ? त्यहाँ त समस्या थिएन, जतिबेला म २१/२२ बर्षको केटो थिएँ। झन् ऐले त म उमेरले पनि परिपक्क्व भएको छु।
त्यो बेला मेरो बोस (सुपरभाइजर) पुरुषोत्तम नेपाली (मानन्धर) र मेरा कोवर्करहरुले मेरो निक नेम नै डिक्श्नेरी राखेका थिए। मलाइ आफिसको सबैजसो पोलिसी र अन्य कुरा याद हुन्थ्यो। कहिले काँही त प्रस्तु गर्दा गर्दै बिचमा पुरुशोत्तम दाइले, कृष्ण भाइ भनेर रेफरेन्स सोधी हाल्नुहुन्थ्यो। अनि म जहिले पनि जवाफको लागि तहार हुनु पर्ने। त्यो समय मलाइ कुनै समस्या थिएन। म दोश्रो दर्जाको कारिन्दा पनि थिइन। हामी सबै समान थियौं।
१८.त्यो बेला नेपालमा म काम गर्ने INGO को एशिया प्यासिफिक रिजनका १७ वटा कन्ट्रीमा मेरो चितवनको प्रोजेक्टले पहिलो भएर २० हजार अमेरिकी डलर जितेको इतिहास मसँग छ। अनि जहाँ मैले काम सिकेको भारतको त्रिवेन्द्रमको प्रोजेक्ट दोश्रो भएको थियो। मैले गुरुलाई नै पछारेको इतिहास पनि मसँग छ।
१९. यस्तै धेरै कुरा छन्, तन्कायो भने एउटा किताब नै बन्ला।
तर पनि म र म जस्तैलाइ प्राथमिकताको स्थान दिएनन यो अमेरिकाको ऐलेको छनोट टोलीले। हालसम्म एनआरएनएमा कुनै पनि तहमा कुनै पनि जिम्मेवारी नलिएका व्यक्तिहरुलाई भने पहिलो प्राथमिकतामा राख्यो। हुन त म भन्दा धेरै जानीफकार उहाँहरु हुनुहुन्छ होला। उहाँहरुलाई गैरआवासीय नेपाली संघबारे धेरै बिधि-बिधान र नीतिका कुरा थाहा होला। अझै पनि कुरा मेरो मात्र होइन अरु थुप्रै व्यक्तिहरु पनि यस्तै छन। सबैलाई आफ्नो कामप्रति आफ्नै लजिक सहि लाग्छ, चाहे त्यो अपराध गरेको नै किन नहोस। सायद यो नै बेष्ट छनोट भन्ने उहाँहरुको लजिक होला। तर बिधि-बिधानले सधै लजिक ठिक हो भन्दैन।
मलाइ टोलीका एक जना छनोटाधिकारीले भन्नुभयो-निर्वाचित भन्दा पूर्व सल्लाहकार पहिलो प्राथमिकतामा पर्छन। अनि मैले सोचे सायद एनआरएन अभियानबारे मेरो पढाइ पुगेनछ होला। म अज्ञानी भएको होला, मेरो छोटो कदको खोटो दिमागमा यति सामान्य कुरा पनि घुसेन छ। छिपाइएको कुरा अर्कै छ।
यति हुँदा-हुँदै पनि कुनी कतैबाट मेरो नाम रोक्न ठूलो जोड गरिएको थियो रे उनैले भनेका। बाध्यतावस छातीमाथि ढुंगा राखी भनेझैं मेरो नाम दोश्रो दर्जाको निर्वाचितमा राखिएछ। सयाद निर्वाचितको पनि पहिलो र दोश्रो दर्जा हुन्छ रे एनआरएनए अमेरिकामा। त्यो पनि नयाँ कुरा सिक्न पाइयो। मन पर्दा र नपर्दा पदिय जिम्मेद्वारी पनि फरक हुने रहेछ। मलाइ त्यो हर्कत देखेर मुसुक्क हाँस्न मन लाग्यो।
ए हजुर आउनुहोस सँगै बसेर खाना खाउँ भन्दा कति सुन्दर हुने थियो। तर, घिच्न आइज साले भनेको जस्तो गरियो। कोहि अपरिचित महिलालाई- तपाइँ त मेरी आमा जस्तै देखिनु हुन्छ भनियो भने कति सुन्दर सुनिन्छ। अनि उनले माया गरेर जवाफ दिन्छिन। तर तिनै महिलालाइ तपाइँ त मेरो बुबाको श्रीमती जस्तै पो देखिनु हुन्छ भन्दा तिनै महिलाले लात हान्छिन। तर दुबैको अर्थ बुबाको श्रीमती जस्तै भन्ने नै हो। यहाँ मलाइ आमा जस्तै भानिएन बुबाको श्रीमती जस्तै भनियो।